မတွေ့တာကြာပြီနော်...။ (Long time no see!)
မနက်တိုင်း စာသင်ခန်းထဲမှာ စောင့်နေကျတပည့်တွေနဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကျောင်းပိတ်လို့ ပြန်တွေ့ရင် ဒီလိုပဲ နှုတ်ဆက်လေ့ရှိတယ်..။ မဇ္ဈိမမှာ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ရုံးတွေက စနေနေ့မှာလည်း ပြူးပြူးပြဲပြဲဖွင့်ကြတာဆိုတော့ တစ်ပတ်မှာ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပဲ အားရက်ရတာကလား..။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတ် အများပြည်သူအားလပ်ရက်တွေ သတ်မှတ်ထားတာ များတော့လည်း စနေတစ်နေ့ကို အစိုးရက ပြန်ဆွဲထားရတဲ့ သဘောပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလက ဆိုရင် လဆန်းပိုင်းမှာ ဒူရဂါနတ်သမီးပွဲတော်နဲ့ လကုန်ပိုင်းမှာ ဒီပါဝလီဆီးမီးထွန်းပွဲတော်တွေအတွက် တက္ကသိုလ်တံခါးကြီးပိတ်ထားလိုက်တာ စာသင်ခန်းလေးကို လွမ်းလို့ မဆုံးဘူး..။ ဒီတော့လည်း တပည့်တွေကို တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ '' Long time no see'' လုပ်မိတော့တာ..။ တကယ်တော့ '' Long time no talk'' ကို လွမ်းတာလည်း ဖြစ်မယ်..။
မနက်ခင်း(၁၁-၁၁-၁၁)ဆီကတော့ သူ့စာသင်ခန်းလေးထဲမှာ ပါဠိနဲ့ ထေရ၀ါဒစိတ်ဝင်စားတဲ့ သြစတြီယားကျောင်းသူတစ်ယောက် တိုးလာပါတယ်။ တက္ကသိုလ်အချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေ့လာရေး အစီအစဉ်နဲ့ တိဘက်တက္ကသိုလ်မှာ ခြောက်လတာ တိဘက်စာပေ ၊မဟာယာနအဘိဓမ္မာနဲ့ ထေရ၀ါဒပါဠိပိဋကတ်တွေကို ရနိုင်သလောက်လေ့လာသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်..။ တက္ကသိုလ်ဒုတိယအဓိပတိ(ပါမောက္ခချုပ်)ကိုယ်တိုင်က သူ့စာသင်ခန်းကို ညွှန်းလိုက်တာမို့ ''ဧဟိ သွာဂတံ'' (''Come, you are welcome'') လုပ်ရပေမှာပ..။ ၀ိဇ္ဇာတန်း(ဒုတိယနှစ်) ကျောင်းသား ရာဂျီဗ် ကူးမာရ်ဆိုတဲ့ လားမားရဟန်းလေးနဲ့ တွဲပြီးသင်ယူဖို့ စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သင်လက်စ ခုဒ္ဒကနိကာယ်၊သုတ္တနိပါတ်ဂါထာတွေကို ချွေးပြန်အောင် ရှင်းရလေသပေါ့..။ ''No sweat'' လို့ခပ်တည်တည်မလုပ်နိုင်ကြောင်းပါ..။
ဒီတော့မှ အွန်လိုင်းပေါ်က ပါဠိသောတုဇနစာသင်သားအပေါင်းကို ငဲ့စောင်းကြည့်မိတော့တာ..။ သြစတြီးယားသူ မသဲအူလေးလိုများ ပိဋကတ်တော်ကြီးကို ဥာဏ်ဝင်စား၊အဘိဓမ္မာတရားနဲ့ မွေ့လျော်၊ ပါဠိစာပေနဲ့ ပျော်ချင်သူစာသင်သားတွေလည်း ရှိတန်ကောင်းသေးရဲ့လို့ တွေးမိလေတော့ အတိတ်က ပါဠိစာသင်ခန်းလေးကို အတိတ်မှာ ထားခဲ့နိုင်ဘူးပေါ့..။ အော် အတိတ်အကြောင်း ဟောင်းမြေ့ပေမယ့်....
အတိတ်ကာလ(Past Tense)ကို ပါဠိသဒ္ဒါဆရာတွေက အဇ္ဇတ္တနီလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာပေကတော့ Aorist လို့ သုံးစွဲကြလေရဲ့..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတိတ်လို့သာ ရိုးရိုးလေး မှတ်ထားပါလေဦး.။ (ပါဠိသဒ္ဒါကျမ်းတွေမှာ အတိတ်ကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဇ္ဇတ္တနီ၊ဟိယျတ္တနီ၊ပရောက္ခာနဲ့ ကာလာတိပတ္တိဆိုပြီး ခွဲခြားပြထားတာ ရှိတယ်. နောက်မှရှင်းပြမယ်လေ..၊)
ဣ(i)-------------------------------------ဣံသု (iṃsu) ဥုံ(uṃ)
သြ(o)၊ဣ (i) ----------------------------------ဣတ္ထ(ittha)
အတိတ်ကြိယာတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ''အ'' လေးတစ်လုံးပိုနေတာ သတိပြုခဲ့မိမယ်ထင်တယ်..။ အဲဒါက ပုံသေတော့ မဟုတ်ဘူး။ မထည့်လည်း ရပါတယ်။ Optional ပါပဲ..။ ဒီလိုလေ
အဟနိ၊ ဟနိ လို့ နှစ်မျိုးသုံးလို့ ရပါတယ်...။
အတိတ်ကြိယာတွေရဲ့ ရှေ့မှာ '' မာ '' ဆိုတာလေး ထည့်ပေးပြီး မလုပ်နဲ့ မသွားနဲ့ မလာနဲ့ (Don't do) (Don't go) (Don't come) ဆိုတဲ့ ၀ါကျတွေ ဖွဲ့နိုင်တယ်..။ မာ အကရိ၊ မာ ဂစ္ဆိ၊ မာ အာဂစ္ဆိ..။
တဒါ(at that time, then)
ယဒါ( whenever, when) (ဒီ ယဒါနဲ့ တဒါ အတွဲလေးတော့ သေချာဂရုစိုက်ခဲ့..)
လေ့ကျင့်ခန်းလေးတော့ ပေးလိုက်ဦးမှ... ဆရာဖြစ်တုန်း တအုန်းအုန်း....တပည့်ဖြစ်ခိုက် တငိုက်ငိုက်....
အဟံ တတြ ၀သိံ။
တေ ကဒါ တတြ ဂစ္ဆိံသု။
ယဒါ တွံ တတော အာဂစ္ဆိ၊ တဒါ မယံ အတြ အာသိံမှာ။
တုမှေ ကဒါ ဇိနိတ္ထ။
မယံ ဣဒါနိ ကိဏိမှာ။
ယတော အဟံ အဇာနိံ၊ တတော အ၀ဒိံ။
တေ တဟိံ ဒေသေသုံ။
အဟံ တဒါ ဣဓ အာသိံ။
ယဒိ ဧ၀ံ သိယာ၊ အဟ ဣဓ အာဂစ္ဆေယျာမိ။
ကဒါ တေ တတြ ဟနိံသု။
တုမှေ မာ ဣဓ ၀သိတ္ထ။
မာ တေ ဧ၀ံ ကရိံသု။
သူတို့ အဲဒီကို သွားခဲ့ကြတယ်
ငါတို့ ဒီမှာ နေခဲ့ကြသပေါ့..
မင်း ဘယ်တုန်းက အဲဒီက ပြန်လာခဲ့သလဲ
အဲဒီအချိန်က မင်းက အဲဒီမှာ ရှိခဲ့တယ်
မင်းဒီမှာ ရှိနေခဲ့ချိန်မှာ ငါတို့က ဟိုကို သွားခဲ့ရတယ်...။
မင်း ဘယ်လို သိခဲ့တာလဲ။
ဘယ်အချိန်က မင်း ၀ယ်ခဲ့သလဲ။
(၁၂-၁၁-၁၁) နံနက် ၃း၅၀ မှ ၆း၀၇ အထိ
(ခြင်ကိုက်ကိုက်နဲ့ စာရိုက်ရတာမို့ စာလုံးအထားအသို အကျအပေါက်များ ပြန်ကောက်ပေးကြပါ...)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 2:46 PM